Archive du 07-juil-2021
Roland Ratsiraka sy Mamy Ravatomanga Mihalalina ny lonilony sy ny fifandirana
Tao anatin’ny andro vitsy raha tsiahivina no efa nandeha ny feo sy ny resaka fa misy mpitondra ambony efa nanao vaksiny Johnson & Johnson, ary isan’ny nilaza an’io ny Depioten’i Toamasina voalohany Atoa Roland Ratsiraka.
Tsy hita intsony izy ity. 2 taona sy tapany mahery saingy mbola tsy hita veroka foana ny tena fizotran’ilay praogramam-panjakana nampanantenaina fa hanavotra an’I Madagasikara anaty fotoana fohy.
Fanjakana Rajoelina Fampiodinan-draharaha sisa
Tsy tafavoaka ny baolina amin’ny ankampobeny ho an’ny Fanjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Olana etsy, sakoroka eroa, savorovoro ary sy atsia,…
Ady amin’ny kere Mila 100 tapitrisa dolara ny fampidiran-drano any Atsimo
Manodidina ny 100 tapitrisa dolara no vola ilain’i Madagasikara amin’izao fotoana hanatanterahana ny tetikasa goavana fampidirina rano fisotro madio any atsimo izay ianjadian’ny kere
Zandarimariam-pirenena Voasambotra ireo saika hamono ny SEG
Lehilahy 6 saika hamono ny Sekreteram-panjakana¬ miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG), ny Jeneraly Ravalomanana Richard no voasambotry ny Vondrotobi-pileovan'-ny Zandarmariam-pirenena Analamanga
Sorena amin’ny Bianco ny APM Fitoriana 8 volana tsy handrenesam-bokatra
Nandefa taratasy misokatra ho an’ny Tale Jeneralin’ny birao mahaleotena misahana ny kolikoly eto Madagasikara na Bianco sy ny mpiara-miasa aminy rehetra I Rakotoarisoa Faniry Alban,
Misavoritaka ny Fanjakana Ho rava tsy ho ela ny governemanta...
Misavoritaka ambony ambany ny samy mpitondra. Miha miakatra ny maripana, ary tsy ny any amin’ny fanoherana no loharan'ny savorovoro fa ny samy ao anatiny no mifamely.
Antoko Tia Tanindrazana Nanampy ny Althere Service info sy ny Anoka
Tontosa ny sabotsy 03 jolay 2021 teo ny fanampiana sy tolon-tanana nataon'ny antoko Tia Tanindrazana tamin'ny fikambanana iray izay misehatra amin'ny fampiofanana
Rano fisotro madio 43%n’ny Malagasy no mahazo hatreto
43%n’ny Malagasy no mahazo rano fisotro madio hatreto, raha ny tatitry ny minisiteran’ny rano sy fahadiovana ary fidiovana.
Mangarahara eny amin’ny CSB II Tsy maintsy hatao peta-drindrina ireo fanafody maimaimpoana
Tsy maintsy hatao peta-drindrina na afisy manomboka izao ireo fanafody maimaim-poana na vidiana amin'ny vidiny mirary amin'ny alalàn'ny FANOME (Fandraisana Anjara NO Mba Entiko)
CEPE 2021 Ny taranja tantara no tena nampikolay ireo mpiadina
Ny taranja tantara no tena nampikolay ireo mpiadina niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE omaly talata 06 jolay raha mora tsy araka ny nanampoizana azy kosa ny laza olana raha araka ny fanazavan’ireo mpiadina.
Fanadinam-panjakana CEPE Omaly ihany dia efa nanomboka ny fitsarana
Nizotra ara-dalana ny fanadinana CEPE notontosaina omaly talata 06 Jolay manerana ny Nosy. Raha ny teny amin'ny EPP Ambodin'Isotry manokana izay nanaovan’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Marie Michelle
Halatra fiara Telolahy no tratra teny Ambohimanambola
Lehilahy miisa telo no saron’ny Polisy miasa ao BC Anosy ny 01 jolay lasa teo rehefa nangalatra fiara mitondra ny marika Renault duster.
Fikambanan’ny mpitsabo nentim-paharazana Tsy nisy nihaino hatreto ny antso avo nataony
Niainga tany Sina ny Coronavirus, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny mpitsabo nentim-paharazana Malagasy, Josephin Andriandrainarivo. Nisy avy eo ny hoe “variant”